Ị nwere ike ịkwado m ụfọdụ ebe dị mma iji gbanwee profaịlụ PR m dị elu nke backlinks?
N'ezie, ịnweta njikọ site na nnukwu ikikere na akwụkwọ siri ike PageRank dịka akwụkwọ akụkọ mba ma ọ bụ ọbụna ụlọ ọrụ mgbasaozi ụwa agaghị echefu ya ma ọlị.Ọ bụ ụzọ dị mma isi mee ka mkpokọta profaịlụ nke weblink gị dị ọhụrụ ma ọ bụ blog ma ọ bụ blog, ma a maara ọrụ ahụ dị ka oge na-ewe oge ma na-arụ ọrụ-kpụ ọkụ n'ọnụ. Ka o sina dị, site n'ichepụta obere creativity n'uche, ị nwere ike ịnwe ngwa ngwa jide ụfọdụ backlinks iji meziwanye profaịlụ PR dị elu nke backlinks. Kedu ihe ọzọ - ma eleghị anya na ị nwetaworị ụfọdụ ihe dị mma ma ọ bụ kọntaktị ndị dị mkpa maka nke a. N'okpuru ebe a, m ga-egosi gị ebe dị mma na ebe ọ bụla ị ga-atụle ka gị na ya nwee njikọ. A sị ka e kwuwe, nke a ga-abụ ohere dị ukwuu iji jikọọ na ụlọ ọrụ weebụ / nkụzi ndị kachasị atụkwasị obi ma kwadoro. Ka o sina dị, ma ngalaba ahụ agaghị enwe mkpa ma ọ bụ oke oge. N'ezie, ọ bụrụ na ejiri aka nri.
saịtị ndị gọọmentị mpaghara
n'etiti ndị ọzọ, weebụsaịtị ma ọ bụ ibe weebụ ma ọ bụ blọọgụ na-akwado nkwado na mpaghara GOV ngalaba njedebe bụ kpọmkwem ndị isi mmalite ndị ahụ na njedebe elu DA (ikike mpaghara) akara ịkụda akara 100-zuru ezu. Na-eche na ọ ga-esiri onye ọ bụla ike imeziwanye profaịlụ PR dị elu nke backlinks na nke na-abịa site na ngalaba gọọmentị, enwere ohere ụfọdụ dị na mpaghara mpaghara. M na-ekwu na ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị na-eji akwụkwọ ndekọ azụmahịa iji mee nkwado maka ịntanetị maka ụlọ ọrụ mpaghara na mpaghara ha. Akwụkwọ ndekọ gọọmentị obodo nwere ike ịbụ ụzọ kachasị mfe na ngwa ngwa iji jide ụfọdụ backlinks ndị ọzọ dị ike na-ezo aka na ebe nrụọrụ weebụ gị ma ọ bụ blog.
Agụmakwụkwọ (Mahadum / College) Peeji peeji nke
Akụrụ ọdụm nke ụlọ akwụkwọ nkuzi ndị a tụkwasịrị obi mara na ha nwere ebe nrụọrụ weebụ ha nke ihe dị ka 90-95 na nnyocha a na-adịbeghị anya). Mana ihe kachasị ike bụ ịchọpụta ihe ziri ezi nke ịbịaru. Nke mbụ, gbalịa imere ha amara - chọpụta ndị ezi omume ị maara dị ka ụmụ akwụkwọ mbụ ma ọ bụ ndị ọrụ. N'iburu n'uche na mahadum na kọleji na-achọ igosi, jiri ya maka uru gị - naanị nye ha ezigbo akụkọ, ọganihu dị egwu, ma ọ bụ ajụjụ ọnụ ọkụ ha chọrọ ịhụ, n'otu oge ahụ na-emelite profaịlụ gị dị elu nke backlinks na a di na nwunye di na nwunye nke ohuru ozo. Kedu ihe ọzọ - ịnweta akara azụ azụ ndị ahụ bara uru site na mahadum ma ọ bụ akwụkwọ ụlọ akwụkwọ sekọndrị, ị na-eji ohere ọzọ na-ekwurịta okwu aha ahia gị ma ọ bụ nweta nkwupụta dị elu n'etiti ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ gị na ụlọ ahịa ahịa.
Ọ bụrụ na ọ dịghị ihe na-enyere aka, nke a bụ ụzọ ọzọ ị ga - esi na - ejikwa mahadum ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ nkụzi ọ bụla ọzọ - na - arụ ọrụ maka inweta gị di na nwunye njikọ ndị ahụ dị oké ọnụ ahịa. Ihe niile ị chọrọ bụ ịnweta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ dị mkpa ma ụmụ akwụkwọ, ma ọ bụ ndị ọrụ. Naanị ịnwa inye onyinye, dịka ọmụmaatụ, koodu ntinye ego efu. N'otu oge ahụ, nke ahụ ga - abụ ụzọ dị ukwuu isi na - azụtakwu òkè, na - eduzi, na ndebanye aha na mkpesa na mgbasa ozi - na - abụghị nke isi njikọ nnweta njikọ anyị. Ma, rịba ama, na ịga nke ọma na atụmatụ a, ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ ọrụ azụmahịa ga-adị mkpa iji nye ihe nwere ike ịzụta ma ọ bụ nyere iwu na ịntanetị Source .